က INTERNET EXPLORER ၌သင်တို့၏ CACHE ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို - INTERNET EXPLORER ကို - 2019
အဓိက Internet Explorer ကို
က Internet Explorer အတွက် cache ကိုဖျက်ခြင်း
ယခင်ကသွားရောက်ခဲ့က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမိတ္တူ, ပုံများ, က်ဘ်ဆိုက်ဖောင့်နှင့်ပိုပြီးဒါခေါ် browser ကို cache ထဲတွင်သင့် hard drive ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံသိုလှောင်မှုဒီမျိုး, ထပ်ကြည့် site ကိုအရှင်ဝဘ်အရင်းအမြစ် loading ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်, ပြီးသားဒေါင်းလုပ်လုပ်အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့အဘို့အခွင့်ပြုခြင်း။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ cache ကိုအသွားအလာကိုကယ်တင်ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာအတော်လေးအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင် cache ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်။
သင်မကြာခဏ site တစ်ခုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါလျှင် Browser ကို cached data တွေကိုကိုအသုံးပြုသည်အထိဥပမာ, သငျသညျတခု updated ကသတိထားမိမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင်သူကသင်တို့သည်နောက်တဖန်အကြည့်အရှုချင်သောဆိုဒ်များ ပတ်သက်. hard disk ကိုသတင်းအချက်အလက်အပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ်။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာကပုံမှန်ဘရောက်ဇာကို cache ကိုရှင်းလင်းဖို့အကြံပြုထားသည်။
ထို့နောက်ဘရောက်ဇာက Internet Explorer ၏ cache ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံစဉ်းစားပါ။
က Internet Explorer 11 အတွက် cache ကိုဖျက်ခြင်း
က Internet Explorer 11 နှင့်သင့် browser ၏အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာဖွင့်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဝန်ဆောင်မှု တစ်တောင်တော်အမွေး (သို့မဟုတ်သော့ Alt + X ကို၏ပေါင်းစပ်) ။ ထို့နောက်ဖွင့်လှစ်သောမီနူးထဲမှာကို select ဂုဏ်သတ္တိများကို browser
ထဲမှာ ဂုဏ်သတ္တိများကို browser tab ကို ဘုံ အပိုင်းတစ်ခုသင်တွေ့ browsing history နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဖျက်ပစ်ပါ ...
next ကိုပြတင်းပေါက် Browsing History ကိုဖျက်ပစ်ပါ လာမယ့်ပစ္စည်းရန်အကွက်ကိုစစ်ဆေး ယာယီ Internet file တွေကိုနှင့် web site များ
11 အစ, အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးနိုင်က Internet Explorer cache ကို browser ကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ဥပမာ, ဒီကိုအလွယ်တကူစနစ်က CCleaner ကိုပိုကောင်းအောင်နှင့်သန့်စင်ရန်အပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်အလုံအလောက် program ကို run ကြည့်ဖို့ ဆေးခြင်း လာမယ့်ရန်အကွက်ထား ယာယီ browser ကိုဖိုင်တွေ အမျိုးအစားထဲမှာ Internet Explorer ကို.
ယာယီ Internet file တွေကိုဆင်တူလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အတူအခြား application ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့အလုံအလောက်လွယ်ကူပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, သင် hard disk space ကိုဂရုစိုက်ပါလျှင်မလိုလားအပ်သောယာယီဖိုင်တွေအတွက်အသုံးပြုသည်မဟုတ်, အစဉ်မပြတ်က Internet Explorer အတွက် cache ကိုရှင်းလင်းဖို့အချိန်ဖို့အချိန်ရှိသည်။
ဗီဒီယို Watch: Components Of The Web - CS253 Unit 1 - Udacity (အောက်တိုဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © Internet Explorer ကို 2019